Photoshop ​အ​တွက် Water Brushes ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကဲ​ဒါ​က​တော့ Water Brush ​တွေ​ပါ . ​ရေ​စက်​ပုံ​စံ ​လေး​များ ​နှင့်​အ​ခြား​ရေ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​တာ ​တွေ​ကို ​ပုံ​စံ​အ​မျိုး​မျိုး ​ဒီ​ဇိုင်း​ဖန်​တီး ​ချင်​သူ​များ ​အ​တွက် ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ . Photoshop ​မှာ ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင် ​ဖန်​တီး​လို့​ရ​တယ် ​ဆို​ပေ​မယ့် Brush ​တွေ​နဲ့ ​ဖန်​တီး​ယူ​တဲ့ ​ဒီ​ဇိုင်း​ဟာ ​ကြည်​လင်​ပြတ်​သား​တဲ့ ​အ​ပြင် ​အ​နား​တွေ​မှာ ​ဖွာ​တာ​တာ ​ဖြစ်​တာ​တို့ ​မ​ရှိ​တော့​ပါ​ဘူး . ​ကျွန်​တော့်​မှာ ​ရှိ​တဲ့ Brush ​တွေ​ကို ​အား​လုံး​ပြန်​ပြီး share ​လုပ်​ပေး​ပါ့​မယ် . ​အား​လုံး ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ .
MyDesign December 22, 2009 at 11:58 AM
down lo ma ya vuu ko nyi